Ngingazuza Kanjani Pinterest Namuhla? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ngabe iPinterest ingangizuzisa kanjani namuhla?
May 12, 2021 0 Comentarios 493
Amapulatifomu ahlukahlukene wokuxhumana athuthukise izindlela zawo zokuxhumana ukuze anikeze abasebenzisi okuhle kakhulu nsuku zonke. Kodwa-ke, iPinterest ibilinye lamakhasi aguquke ukuhlinzeka ngesipiliyoni ihlala njalo futhi iqotho kubo bonke abantu onqume ukungena kuwo.
Yize abaningi bengazazi zonke izinto ezinhle ezingalethwa yiPinterest namuhla, ithuluzi liqukethe izinto ezikuvumela ukuthi uvuselele umhlaba kwezamabhizinisi, kwezenhlalo ngisho nasesihlokweni sokukuqondisa emibuzweni yemibono ngezihloko ezahlukahlukene.
Ngakho-ke, iPinterest inezinto eziningi ezenzelwe yona ezenza elinye lamakhasi akhanga kakhulu ukwenza imisebenzi ehlukahlukene namuhla. Okungakuniki umuzwa wokusetshenziswa yi cabanga ngaleli khasi njengenjini yokusesha yamaphrojekthi wesikhathi esizayo, ngoba lokhu kunokunikela okuningi.
Pinterest njengosizo lwezezimali
Akuyona imfihlo kunoma ngubani ukuthi izinto zishintshile ngenxa yobudala bedijithali futhi ikakhulukazi ngezingxoxo. Abantu bakhetha ukwenza amakholi wevidiyo ukuvala amadili kunokuya emihlanganweni emide futhi ekhathazayo evame ukungashiyi umqondo ophelele walokho abakufunayo.
Ngaphambi kwakho konke lokhu, I-Pinterest isibe yikhasi elikhuthaza umbono ukuze abantu abaqala imizamo yabo bafeze konke abakufunayo ngesikhathi esifushane kakhulu. Kodwa-ke, kuyadingeka ukuthi abasebenzisi okukhulunywa ngabo babeke yonke imizamo yabo ukufeza umsebenzi onjalo.
Ingabe kunemiphumela eminingi emihle?
Imiphumela incike kuphela emsebenzini abantu abafuna ukufaka isandla namuhla. Eqinisweni, abasebenzisi imvamisa kufanele baseshe ikakhulu ukuthi bangangena kanjani ngegciwane ezintweni eziphakanyisiwe.
Kunamasu we ukusetshenziswa kwePinterest njengeplatifomu yokuxhumana Kepha konke kuzoya ngamandla onawo ukusebenzisa lezi zindlela namuhla.
Izinzuzo zokusebenzisa iPinterest namuhla
Akuwona wonke amakhasi ku-Pinterest anokuningi ongakunikeza kulezi zinsuku. Kodwa-ke, ngenxa yezinketho ezinkulu, izinto ezivelile ezinikeza abasebenzisi ithuba lokusetshenziswa.
Thuthukisa amakhono akho we-Pinterest
Abantu abazinikele ekuthuthukiseni amaphrojekthi, izinhlelo nemibono banethuba lonke lokushiya ulwazi lwabo ekhasini lize siza abanye. Ngenxa yalokhu, abaningi bathuthukise izinsiza zabo futhi bangakufakazela ukuguqulwa kwezinkampani ezincane nezinkulu iphupho labo ebelinalo.
Khula ngokwezezimali ku-Pinterest
Abasebenzisi bangakhombisa imibono yabo ngisho uzithengise ngePinterest ukufeza imali engenayo yezomnotho engcono. Kodwa-ke, ukusebenzisana nabantu besithathu nakho kuwumqondo omuhle ozokhiqiza imiphumela emihle kakhulu.
Thola ukuxhumana ku-Pinterest
Izinkampani zinamandla okuthola izinkampani ezihamba phambili ku-Pinterest ukuba ngenye yezinketho zezinyunyana. Ngenxa yalokhu bakwazile ukuvela ngokuhlangana nasendaweni yokwakha.
Izinhlangano eziningi zize zakhombisa ukuthi ngenxa yobumbano phakathi kwezinhlangano zenza ngcono isithombe sazo phambi komphakathi.
1 Pinterest njengosizo lwezezimali
1.1 Ingabe kunemiphumela eminingi emihle?
2 Izinzuzo zokusebenzisa iPinterest namuhla
2.1 Thuthukisa amakhono akho we-Pinterest
2.2 Khula ngokwezezimali ku-Pinterest
2.3 Thola ukuxhumana ku-Pinterest
Ngingaba kanjani nePinterest ngaphandle kokulanda?